Kadib Barbarihii Las Palmas, Real Madrid Oo Maanta Dib U Bilaabatay Tababarka Ay Ugu Diyaar Garoobayso Kulanka Champions Leaque-ga Ee Borussia Dortmund – idalenews.com
Real Madrid ayaa isla maantaba dib ugu soo laabtay tababarka kadib markii ay xalay barbaro 2:2 ah la soo gashay kooxda Las Palmas waxayna Los Blancos bilawday in ay isku diyaariso kulanka Champions Leaque-ga ee ay Germany ku booqan doonto kooxda Borussia Dortmund.
Real Madrid ayaa labadii kulan ee ugu danbeeyay ee La Ligaha barbaro soo gashay taas oo keentay in kooxda Zidane ay hal dhibic hogaanka kaga hayso Barcelona. Laakiin Real Madrid ayaa iska ilaawaysay wixii ka soo qabsaday kulamadii Villarreal iyo Las Palmas waxayna dareenkeeda ku soo jeedisay kulanka adag ee Dortmund.
Cristiano Ronaldo oo kulankii Las Palmas cadho wayn u muujiyay Zidane kadib markii lagu soo badalay Vazguez ayay farxadi ka muuqatay in uu ku jiray tababarka kooxdiisa, waxaana sidoo kale tababarka qayb ka ahaa Pepe iyo xidigaha kale ee muhiimka ka ah kooxda Madrid. Laakiin Casemiro ayaa muddo aan la shaacin ka maqnaan doona Real Madrid.
Real Madrid ayaa kulankii hore ee Champions Leaqueg-a dirqi guul kaga gaadhay kooxda Sporting iyada oo Los Blancos ay dhamaadkii kulankii Bernabeu u baahatay laba gool oo la dhaliyay daqiiqadihii ciyaarta ugu danbeeyay, sidaa daraadeed, Zidane ayaa kooxdiisa ka doonaya in ay qaab ciyaareed fiican ku wajahaan kooxda dhiiranaanta wayn ku ciyaarta ee Dortmund.